प्रवास | mulkhabar.com
कोरियामा काम गर्ने नेपालीको तलब बढ्यो
काठमाडौं , ३ साउन । कोरियामा सन् २०१७ देखि लागू हुने गरी इपीएस प्रणालीबाट गएका कामदारको न्युनतम तलव १ लाख ३० हजार रुपैयाँ तय गरिएको छ । रोजगार अमुनति प्रणाली ९इपीएस०मार्फत कोरिया पुगेका विदेशी कामदारको न्युनतम् तलवमा वृद्धि हुने भएको हो । कोरियाको श्रम मन्त्रालय अन्तरगतको पारिश्रमिक निर्धारण परिषद्ले इपीएस कामदारको तलवामा ७ प्रतिशतले वृद्धि […]
Posted in प्रवास,प्रवास मुख्य Read More »
‘ब्युटिफुल उमन अफ बहराईन’ को ताज नेपाली चेली इन्दिरा क्षेत्रिलाई
युएई, ११ कात्तिक ।बहराइनको चर्चित म्यागेजिन बहाराइन कन्फिडेन्टलले आयोजना गरेको व्युटिफुल उमन अफ बहराइनमा भाग लिएकी नेपालकी इन्दिरा क्षेत्रि विजय भएकी छन। पर्वत जिल्ला हुवास ३ हातेमालो चोक घर भएकी इन्दिराले विभिन्न देशका प्रतिस्पर्धीलाई पछि पार्दै विजयी भएकी हुन्। बिहीबार भएको फाईनलमा सबै भन्दा धेरै भोट ९,९५७ ल्याए पछि बहराईन कन्फिडेन्टलले इन्दिरालाई विजयी घोषणा गरेको हो । आमा नैना कुमारी क्षेत्रि र बाबा टिका बहादुर क्षेत्रीकी कान्छि छोरी रहेकी ईन्दिरा रोजगारीको शिलशिलामा विगत आठ बर्ष पहिले बहराईन पुगेकी थिईन। बहराइनमा सामाजिक कार्यमा सक्रिय उनी विभिन्न संघ संस्थामा आबद्द छन्। अन्तराष्ट्रीय स्तरको कार्यक्रममा बहराईनमा भाग लिएकी इन्दिराले नागरीकसंग भनिन् यो जित मेरो नभई नेपाल र नेपालीको हो /उनले आफुलाई जिताउन भोट गर्ने सम्पूर्णलाई धन्यवाद व्यक्त गरेकी छन्।
कराते संघद्धारा मलेसियामा क्रियाशील व्यक्तिहरुलाई सम्मान
काठमाडौं,१३ असार । नेपाली प्रवासी सितोरियो कराते संघले मलेसियामा विभिन्न क्षेत्रमा क्रियाशील व्यक्तिहरुलाई सम्मान गरेको छ । आइतबार यहाँ एक कार्यक्रम गरि उक्त संस्थाले मलेसियामा रही नेपाली खेलकुद र सामाजिक क्षेत्रमा योगदानपुर्‍याएवापत खेलाडी र पत्रकारहरुलाई सम्मान गरेको हो । संघले यसअघि फिलीपिन्समा सम्पन्न खेलमा पदक दिलाउन सफल खेलाडीहरु क्रमशः कर्ण बहादुर राई, अजित तामाङ, दिपक […]
अष्ट्रेलिया र युएइका राजदूतद्धारा प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग भेटबार्ता / सम्बन्ध थप सुदृढ हुने विश्वास
काठमाडौं, ३१ साउन । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेपालका लागि अस्ट्रेलिया र युएइका राजदूतबीच भेटबार्ता भएको छ । सोमबार बिहान प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा भएको भेटमा राजदूतले प्रधानमन्त्रीलाई बधाई ज्ञापन गर्दै कार्याकाल सफलताको शुभकामना व्यक्त गगरेका थिए । भेटमा राजदूतले नयाँ सकारको कार्याकालमा नेपाल र अस्ट्रेलियाबीचको आपसी सम्बन्ध थप सुदृढ हुने विश्वास व्यक्त […]
भारत भ्रमणमा रहेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई प्रवासीले सुनाए यस्ता गुनासा
नयाँ दिल्ली , ३१ भदौ । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको निमन्त्रणामा चारदिने राजकीय भ्रमणमा रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले बिहीबार विभिन्न राजनीतिक दलका नेता एवम् नेपाली प्रवासीसँग अन्तरक्रिया गरे । भेटघाट तथा अन्तक्र्रियाका क्रममा उनले नेपाल–भारत सम्बन्धका विविध आयाम एवम् द्विपक्षीय हितका विषयमा कुराकानी गरेका हुन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेपाली जनता र आफ्नो मुलुकको हितका लागि […]
के भयो प्रवुद्ध समुहको बैठकमा ?
काठमाडौं, १९ असोज नेपाल(भारत प्रवृद्ध समूहको बैठकमा सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धि पुनरावलोकन गर्ने सैद्धान्तिक सहमति भएको छ । नयाँदिल्लीमा बुधबार सकिएको ईपीजीको दुई दिने बैठकमा सन्धि पुनरावलोकनको सहमति भएको हो । सन्धिमा पुनरावलोकनका लागि नेपाली पक्षले केही बुँदा राखेको छ र, यसमा प्रारम्भीक छलफल भएको छ । नेपालले लामो समयदेखि यो सन्धि […]
Posted in एक्सक्लुसिभ समाचार,प्रवास,मुख्य समाचार Read More »
मृत्युदण्डको सजाय पाएका एक नेपाली युवाले माफी पाए
पर्वत । साउदी अरबलाई कडा कानुन भएको देशको रूपमा चिनिन्छ । त्यही देशमा एउटा लचिलो व्यवस्था भइदिँदा अदालतबाटै मृत्युदण्डको सजाय पाएका एक नेपाली युवाले माफी पाएका छन् । यसरी ‘जीवनदान’ पाएका छन् पाङराङ ७, पर्वतका उत्तम कुँवरले । उत्तमलाई साउदीको अदालतले आफ्नै सहकर्मीको हत्या गरेको भन्दै मृत्युदण्डको फैसला सुनाएको थियो । कुँवरले ३० सेप्टेम्बर २००९ […]
जापानमा पनि संविधान दिवस
जापान, ५ असोज नेपालमा संविधान जारी भएको एक वर्ष पुरा भएको खुशीयालीमा संविधान दिवस मनाएको बेला नेपालबाट हजारौं कोष टाढा रहेको जापानमा पनि संविधान दिवस मनायएको समाचार आएको छ । टोकियोमा मङ्गलबार साँझ संविधान दिवस मनाइएको हो। उक्त कार्यक्रममा जापानस्थित नेपाली राजदूतावासका कार्यवाहक राजदूत कृष्णचन्द्र अर्याल पनि सहभागि भएका थिए । उनले मुलुकले लामो समयको […]
बेल्जियममा सोलिडारिटी फेस्टिभल
बेल्जियम, ४ असोज । समुद्री तट नजिक रहेको ब्रेदेनेमा यस वर्षको सोलिडारिटी फेस्टिभल ‘मानिफेष्टा’ भव्यरुपमा सम्पन्न भएको छ । आयोजकले जनाएअनुसार, मेलामा दर्शकहरुको उत्साहनजक सहभागिता रहेको थियो । विश्वभरिका सामाजिक र राजनीतिक संघ संस्थाहरुको इन्फो स्टल रहेको उक्त मेलामा लुम्बिनी–कपिलवस्तु विश्व अभियान, बेल्जियमले नेपालको पहिचान गराउदै नेपालको पर्यटन प्रवर्द्धन कार्य गरेको छ । मेलामा अभियानले […]
अब म्यानपावर कम्पनीको काराबोर बैंकिङ प्रणाली मार्फत् हुने !
काठमाण्डौं । म्यानपावर व्यावसायीले वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारहरुसँग गर्ने सबै कारोबारलाई बैंकिङ प्रणालीमा ल्याउने तयारी सरकारले गरेको छ । कामदारले सिधै नगद म्यानपावरलाई रकम बुझाउँदा ठगी हुने क्रम बढेपछि नयाँ व्यवस्था गर्न लागिएको हो । श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगार ऐन संशोधनका लागि तयार गरेको मस्यौदामा म्यानपावरका सबै कारोबारलाई बैकिङ प्रणालीमार्फत गर्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव […]
Posted in प्रवास Read More »